उम्मेद्वार - नारायण प्रकाश साउद
नारायण प्रकाश साउद नेपाली कांग्रेस कन्चनपुर २
२०१९ सालको साउनमा डडेल्धुरामा जन्मिएका नारायणप्रकाश साउद, एन. पी. साउदका नामले चिनिनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एन.पी. साउदले महेन्द्र मावि कञ्चनपुरबाट एसएलसी पास गर्नुभएको हो । उहाँले इलाहावाद, उत्तरप्रदेश भारतबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तहको अध्ययन पूरा गर्नुभयो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह पास गर्नुभएको छ । २०३६ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको साधारण सदस्य रहेर राजनीति थालेका साउद २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँ २०६३ सालमा पनि व्यवस्थापिका संसदको सदस्य हुनुहुन्थ्यो । २०७० सालको चुनावमा कञ्चनपुर २ बाट १३ हजार ५ सय ६१ मत ल्याएर विजयी भएका साउद २ पटक मन्त्री भैसक्नुभएको छ । उहाँ २०५८ सालमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री हुनुभएको थियो भने २०७० सालमा उहाँ सिँचाइ मन्त्री हुनुभएको थियो । उहाँ अहिले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।